ओछ्यानमा के चाहन्छन् महिला ?
सेक्स वास्तवमा एक सुन्दर अनुभूति हो । चाहे यो पहिलो पटक होस् या नियमित यसले कुनै फरक पर्दैन । महिलाले हाम्रो सामाजिक चेतनाका कारण आफ्नो सेक्स इच्छा बारे खुलेर भन्न सक्दैनन् । के तपाईंलाई थाहा छ एक महिला सेक्सको दौरानमा के चाहन्छिन् । यहाँ तपाईंलाई हामी एक महिला सेक्सको दौरानमा के चाहन्छिन् तर भन्न सक्दिनन् भन्ने कुरा बताउनेछौं ।
हरेक महिला चाहन्छिन्की उसको पार्टनरले उनलाई निकै प्रेमले स्पर्ष गरोस् । यो तरिका अपनाउँदा सेक्सको आनन्दको मात्रा पनि निकै धेरै हुने गर्छ । यदि तपाईं सेक्स पार्टनरको साथमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा नभुल्नुहोस् ।
उनको तारिफ गर्न नभुल्नुहोस्
आफ्नै तारिफ सुन्न हरेक मानिस आतुर हुन्छ नै । सेक्सको दौरानमा उनलाई ‘आइ लभ यू’ या त ‘यू आर पर्फेक्ट’ जस्ता शब्दहरुले उनलाई खुसी बनाउने छ । अन्य तरिकाले पनि तपाईंले आफ्नो पार्टनरको तारिफ गर्न सक्नुहुनेछ । उनलाई महसुश गराउनुहोस् की उनी कति सुन्दरी र राम्री छिन् ।
सेक्सको दौरानमा डर्टी टक पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसलाई महिलाले स्वीकार पनि गर्छिन् । यसले महिलालाई सेक्सको भोक बढाउने काम गर्छ ।
उनी आफैलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस्
सेक्सको दौरानमा उनी आफैलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस् । उनले आफ्नो पुरुष साथीसँग प्रतिस्पर्धा चाहन्छीन् । उनको भावनाको निकै ख्याल गर्नुहोस् ।
आफ्नो भूमिका बारे महिला निकै आकर्षित हुन्छन् । आफ्नो क्षमताद्वारा उनलाई उचित भूमिका दिनुहोस् ।
बेडरुममा उनलाई फन्टासी पनि मन पर्छ । सेक्समा फ्यान्टासीको प्रयोगले दुवै जना रमाइलो महसुस गर्छन् । उनको फन्टासीको बारेमा जरुर बुझ्नुहोस् ।
सेक्सको दौरानमा फरक–फरकका एक्सपेरिमेन्ट पनि महिलाले मन पराउँछिन् । यो प्रयोगले सेक्सलाई निकै आनन्द बनाउनेछ ।
प्रेम र रोमान्स
एक सुन्दर सेक्स सेसनपछि तपाईंको पार्टनरलाई प्रेमले भरिएको अंकमाल आवश्यक पर्छ । सेक्सपछि जहिल्यै उनलाई प्रेमपूर्वक मुसार्नुहोस् । उनीसँग गफ गर्नुहोस् उनीप्रति कृतज्ञ हुनुहोस् ।
भुइँमा बसेर खानुको यस्ता छन् फाइदाहरु
शरीरबाट पसिनाको दुर्गन्ध हटाउन यस्तो उपायहरु अपनाउनुहोस्
यी सामान्य गल्तीले तपाईंको सौन्दर्य ध्वस्त बनाइरहेको त छैन !
एक रात नसुत्दा के हुन्छ ?
यी हुन् प्राय महिलाले मनभित्र गुम्स्याएर राख्ने कुराहरू